हाँसोमा कोरिया जाने नेपालीकाे गलामा किन हुन्छ पासो? - Everest Dainik - News from Nepal
हाँसोमा कोरिया जाने नेपालीकाे गलामा किन हुन्छ पासो?
काठमाडौंः इपीएस प्रणालीबाट रोजगारीको लागि दक्षिण कोरिया गएका नेपाली कामदारले अत्याधिक मात्रामा आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाउँदै गएको पाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा कालगति, सडक, कार्यस्थल दुर्घटना भन्दा आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाउनेको संख्या धेरै बढेको एक तथ्याङ्कले देखाएको हो ।
विभागको तथ्याङ्क अनुसार इपिएस प्रणालीबाट वि.सं.२००८ देखि २०१९ सम्म ६५ हजार ८४५ जना नेपाली रोजगारीमा गएकोमा १०५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
तथ्याङ्कका आधारमा मृत्युको कारण नखुलेको संख्या ३४, सुतेको अवस्थामा २५ र आत्महत्या गरेर मर्नेको संख्या २० रहेको छ । त्यसैगरी, कालगतिले मृत्यु भएको संख्या तीत छभने सडक दुर्घटनामा आठ र कार्यस्थलमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १३ जना रहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस लकडाउन नगरिकनै कोरोनाको विष्फोटलाई कसरी रोक्न सफल भयो दक्षिण कोरिया ? (विशेष रिपोर्ट)
कोरियामा आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्ने क्रम रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताउँदै यस विषयमा बोर्डले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अनुसन्धान गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
आत्महत्या गरेर मर्ने घटना कोरियामा जटिल समस्या बन्दै गएको बताउँदै उनले यसबारे अध्ययन गरेर चाँडै कारण पत्ता लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कोरियास्थित नेपाली दूतावाससँग यस बिषयमा कुरा गर्दा सामाजिक लगायत विभिन्न कारण बताइए पनि एकिनका साथ भन्ने अवस्थामा नरहेको बताउँदै यो समस्या अनुसन्धानको विषय भएको उनी बताउँछ ।
कमाइको हिसाबले दक्षिण कोरिया आकर्षक गन्तव्यका रुपमा मानिए पनि मानसिक तनाव, कामको चाप, डिप्रेसनको अवस्थाका कारण आत्महत्या हुने गरेको मनोविश्लेषकहरु बताउँछन् । दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षा उत्तीर्णपछि नेपाली श्रमिकलाई कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि लैजाने गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस उत्तर र दक्षिण कोरियाली सेनाबीच सिमानामा गोली हानाहान
यता, वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डितका अनुसार कोरियामा धेरै पढेका नेपाली कामदारले सामान्य पढेकासँग एउटै स्तरको काम गर्नुपर्दा धेरै पढेका कामदारलाई डिप्रेसन भएर आत्महत्या हुने एउटा कारण भएको छ ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि जाने देशको कामलगायत सबै पक्ष बुझेर मात्र जान निर्देशक श्रेष्ठको सुझाव रहेको छ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङले कोरियामा नेपालीले आत्महत्या गरेको विषयमा एक वर्ष अघि एउटा गोष्ठी समेत भएको जानकारी दिए ।
अरु देशको तुलनामा कोरियाका नागरिकले पनि आत्महत्या गर्ने गरेको बताउँदै त्यहाँका नागरिकको देखासिकी र वातावरणका कारणले नेपालीले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने उनी अनुमान गर्छन् ।
रोजगारीको लागि अन्य मुलुकबाट त्यहाँ गएका कामदारले गर्ने आत्महत्यालाई समयसापेक्ष तुलनात्मक अध्ययन गरेर पनि कारण पत्ता लगाउनसक्ने उनको विश्वास रहेको छ ।
यस बारेमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले कोरियामा रहेको नेपाल राजदुतावासले विभिन्न परामर्श सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । –गाेरखापत्र दैनिकबाट
ट्याग्स: इपीएस प्रणाली, दक्षिण कोरिया, नेपाली कामदार